သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစွဲခြင်းနှင့်သင်လုပ်နိုင်သည်ဟူသောလက္ခဏာခြောက်ခု။ Diana Baldwin LCSW မှ (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်သည်
ဒိုင်ယာနာ Baldwin ကနေတဆင့်
နိုဝင်ဘာ 30, 2016 အပေါ်
ဒါဟာဆက်ဆံရေးအတွက်ပြဿနာတစ်ခု၏ပိုပိုပြီးဖြစ်လာနေသည်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးရှိစေခြင်းငှါခံစားရလျှင် porn စွဲ, မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြissuesနာများ၏နက်ရှိုင်းမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်လူအများကသစ္စာဖောက်ခံရခြင်း၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်း၊ ဤအရာသည်လျင်မြန်စွာ“ နောက်အရာအားလုံးသည်ကြီးကျယ်သည်” (သို့)“ သူတို့တကယ်ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာငါသိပါတယ်” နှင့်နောက်ဆက်တွဲမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
မကြာခဏဒီမှန်ပေ၏ သူတို့ဖြစ်ကောင်းကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့က, သူတို့အပျေါမှာသင်နှင့်သင့်ကြားဆက်ဆံရေးဟာသေဆုံးသူယူပြီးကြောင်းပြဿနာတစ်ခုနှင့်အတူရုန်းကန်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဘို့ဆင်ခြေတရားမျှတသို့မဟုတ်စေရန်စဉ်ဆက်မပြတ်လိုအပ်သော်လည်း, ငါတို့အထပ်ထပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာသံသရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်အရာဖြစ်တယ်။
အခြားအစှဲကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းပြဿနာရုံလူတစ်ဦးထိခိုက်စေပါဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌လူတိုင်းနှိပ်စက်တာ။ သငျသညျဤပြဿနာကနေအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နာကျင်မှုခံစားခဲ့ရဘူးသောဖြစ်နိုင်ခြေနီးပါးအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းဖွယ်ရှိသင်နှင့်သင့်ကြားဆက်ဆံရေးထိခိုက်, ပြီးတော့သင်ကအားကောင်းလာစေရန်နှင့်သင့်လျော်သောနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ထားဖို့နညျးလမျးအခြို့အကြောင်းပြောဆိုကြောင်းခြောက်လနည်းလမ်းတွေကိုကြည့်ကြရအောင်။
1 ။ သင့်ရဲ့လိင်ဘဝခံစားနေရပြီးဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့လိင်ဘဝလျော့သို့မဟုတ်လုံးဝပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလိင်ဆက်ဆံပြုကြသောအခါ, ကွန်နက်ရှင်မရှိ, သူတို့သည်ပစ္စုပ္ပန်မထင်ကြဘူး။
လူတို့သညျအဘို့, ဤသူရန်အသုံးပြုတူသောဖျော်ဖြေဖို့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ်ရုန်းကန်မှုများအဖြစ်ဖွင့်ပြပါလိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏသူတို့မှားဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအံ့သြမိတ်ဖက်ထွက်ခွာမည်။ သူတို့ဟာမကြာခဏသူတို့ကိုယ်သူတို့မေးခွန်းထုတ်စတင်သူတို့အလုံအလောက်ဒါပေါ်မှာပျော်စရာ, အလုံအလောက်ဂျပိန်, လုံလောက်အောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိ။
2 ။ သူတို့ရဲ့အရသာပြောင်းလဲပြီ။
သူတို့ဟာသူတို့မရောက်မီစိတ်ဝင်စားကြဘူးသောအရာမှကွဲပြားခြားနားသောဆွဲဆောင်မှုတီထွင်ခဲ့ကြe. ဤရွေ့ကားသင်နှင့်အတူမသက်မသာဖြစ်ကြသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်သောအရာဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကအိပ်ရာမှာပို, တောင်းဆိုမှုများရန်လိုခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
3 ။ သူတို့ကပိုပြီးဆုတ်ခွာနှင့် detach လုပ်လိုက်သောနေကြသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုသူတို့ဆုတ်ခွာဖြစ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ သငျသညျတခါရှိခဲ့ဆက်သွယ်မှုမရှိတော့ lit သူတို့တသန့်နှင့်ဝေးလံသောများမှာကဲ့သို့ခံစားရသည်။
ဤသည်ကိုကိုင်တွယ်ရန်မိတ်ဖက်များအတွက်နာကျင်ပြဿနာနှင့်ပေါ်တွင်သင်၏လက်ညှိုးကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကို detach လုပ်လိုက်သောခံရသောအခါဖော်ပြရန်ခက်ခဲနေသောကြောင့် ပို. ပင်နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။ သင်ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းနေကြသည်တကားဟုသူတို့အားဤဖော်ပြရန်ရန်ကြိုးစားသောအခါသူတို့ကသငျသညျအပျေါမှာလှည့်စေနိုင်သည်။
4 ။ သူတို့ကသငျသညျပိုအရေးပါဖြစ်ကြသည်။
ညစ်ညမ်းသို့အကြီးအကျယ်နေသောလူတွေဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက် objectify လေ့နှင့်ပိုပြီးအရေးပါဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာသင်ကိုယ်သင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မကောင်းတဲ့ခံစားခြင်းနှင့်သင်ပြုသို့မဟုတ်ကြိုးစားကြဘာမျှမလုံလောကျကောငျးတကြောင်းခံစားထွက်ခွာမည်။ ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့ psyche နှင့် Self-လေးစားရန်အလွန်ထိခိုက်ပါတယ်။
5 ။ သူတို့ကအွန်လိုင်းအချိန်အများကြီးဖြုန်းနေကြတယ်။
သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်, အထူးသဖြင့်နှောင်းပိုင်းတွင်ညအချိန်တွင်သို့မဟုတ်ထူးဆန်းအချိန်များတွင်, အွန်လိုင်းလမ်းကိုပိုမိုအချိန်ဖြုန်းကြောင်းကိုသင်ရှာပါ။ သူတို့ကလာမယ့်သင်တို့ဆီသို့ထိုင်လျက်နှင့်ဤလုပ်နေတာ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့သီးခြားတပါးတည်းသာအချိန်အများကြီးဖြုန်းနေကြတယ်ကြသည်မဟုတ်။ တစ်ဖက်ကွန်ပျူတာသူတို့နှင့်အတူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှရှေးခယျြခံရကြောင်းခံစားရပေမည်အဖြစ်ဤသူ့ဟာသူအတွက်သစ္စာဖောက်များကဲ့သို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မိမိတို့၏ Device များနှင့်အတူအလွန်အကာအကွယ်များနှင့်လျှို့ဝှက်ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသို့မဟုတ် unguarded ဘာမှစွန့်ခွာဖို့သတိထားပါကြောင်းကိုသတိထားမိ။ သင်ပိုမိုမုသာစကား၌သူတို့ကိုဖမ်းစေခြင်းငှါသို့မဟုတ်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပင်ထင်ရသောသေးငယ်တဲ့အမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. အလွန်ခုခံကာကွယ်ဖြစ်လာပေမည်။
ဒါကြောင့်ယခုဘာလဲ? သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်ကွောငျးသိရသငျတို့ကအားသာချက်သောနညျးလမျးမြားကိုမြင်ရဖို့စတင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်သလဲ?
1 ။ နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပါ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, သင်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအပွငျပွောငျးလဲခွငျးသို့မဟုတျကျော်လွှားစေပါလို့မရပါဘူး။ သငျသညျထောက်ခံနှင့်ကိုယ်အဘို့ရှင်းလင်းစွာနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ထားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကသင်လက်ခံရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်သောအရာကိုသကဲ့သို့ကောင်းစွာပေးဖို့ဆန္ဒရှိနေကြသည်နိုင်ပါတယ်။ အပေါင်းအဖေါ်များမကြာခဏသူတို့ left ဘာမျှမနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ကြောင်းရုန်းကန်လူတစ်ယောက်ရဲ့ကြိုးစားကူညီပေးဖို့သိပ်ပေးပါ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ရှင်းလင်းစွာနယ်နိမိတ်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များချိန်ညှိခြင်းစိတ်ကောင်းသောသငျသညျစောငျ့ရှောကျမြားနှငျ့ grounded ဒါပေမယ့်အဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့ကိုကူညီလိမ့်မည်သာ။ ဒါကကျနော်တို့အစစ်အမှန်ပြောင်းလဲမှုဖန်တီးပါဘူးရာဇသံကိုသို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်မှုများ-ပေးသောမဆိုလိုပါ။ ဤသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သူတို့လုပ်ပေးသို့မဟုတ်ဆိုဘာမှအတူတက်ထားကြောင်းမဆိုလိုပါ။ စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူသင်နှင့်သင့်ဆက်ဆံရေးနယ်နိမိတ် Set, ပြီးတော့သူတို့ကိုကိုင်ထားပါ။ တစ်ဦးနယ်နိမိတ်ကိုပြင်ဆင်ခြင်း, ပြီးတော့သူကကူးအခါကရွေ့လျားသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ယ့်နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးသည်မဟုတ်နှင့်သာပိုပြီးနာကျင်မှုများအတွက်သင်တက်ထားမည်။
2 ။ သင့်ရဲ့အနှုတ်လက္ခဏာသံသရာပြောင်းလဲပါ။
ဤအခြေအနေအများအပြားစုံတွဲများမသိဘဲတကပျော့ဒီဂရီမှဖွင့်လျှင်ပင်, ထိုအလွဲသုံးစားမှုသံသရာတဆင့်သွားကြသည်။ သူတို့သည်နောက်တဖန် relapses သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဖက်ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြရဲ့တစ်ခုခုသင်တွေ့ပြီးနောက်, တစ်ထိုးနှက်ထမကြာခဏလည်းမရှိ။ သူတို့ကခုခံကာကွယ်ဖြစ်လာဒေါသထွက်နေတဲ့, တစ်ခုခုသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးအပြစ်တင်, ဆင်ခြေစေသည် may သို့မဟုတ်သင်ပေါ်မှာလှည့်ဒါကြောင့်သင်, သင်အမှားတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်ဟုခံစားရအလုံအလောက်ကောင်းသောမဟုတ်, etc အလုံအလောက်အထောက်အကူဖြစ်စေမဟုတျပါ
ထိုနောက်မှအဲဒီမှာများသောအားဖြင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၏အချို့သောမျိုးဖြစ်ပါသည်: သူတို့က, တောင်းပန်သူတို့အကူအညီရလိမ့်မယ်ကတိပေး, သူတို့ကအလေးအနက်များမှာဤအချိန်ကတိပေးသူတို့ကိုချစ်နှင့်သင်တန်ဖိုးထားဘယ်လောက်ကိုသင်ပြောပြပါ။ အချို့လူများကအစားဒီအဆင့်မှာခိုင်မာစေခြင်းနှင့်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရာလို့ပြော "ငါသည်သင်တို့အားနေဖို့အောင်မဟုတ်ပါဘူး။ " သူတို့အခုသူတို့နေထိုင်ချင်အဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားနဲ့ဘယ်လောက်သူတို့ကဂရုစိုက်နေကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမကြာခဏဖက်နေထိုင်အောင်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည် ဆက်ဆံရေး။ အဆိုပါပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးပြီးနောက်သူတို့ပြန်သွားကြသည်သို့မဟုတ်နောက်တဖန်ထွက်ပြုမူနှငျ့သငျကျောအတူတူပင်သံသရာ၌ရှိကြ၏သည်အထိအရာအားလုံးအကြီးနှင့်အပျော်ရွှင် (သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးနောက်ကျောအခြေခံမှ) သည်အဘယ်မှာရှိတစ်ဦးပျားရည်ဆမ်းခရီးကာလလည်းမရှိ။
ဤသည်သံသရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာအနည်းဆုံးအခွန်နှင့်အဆိုးဆုံးမှာမတော်မတရားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအပြင်းအထန်စိတ်ဖိစီးမှုသည်နှင့်သင်အရူးတာပေါ့ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့သံသရာကိုကြည့်ပြီးဤထိခိုက်သည်နှင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်ခံရဖို့လိုတစ်ခုခုပါလျှင်သိရှိနိုင်ဖို့အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ။
3 ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဂရုစိုက်ပါ
ဒါဟာတကယ်သင်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုကျော်ရှိသည်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းဒီဖတ်နေသို့မဟုတ်နောက်ကျောကိုသင်ပျော်မွေ့နေတဲ့လူတန်းစားသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုသို့လာပြီ, တစ်ဦးကုထုံးကိုမြင်လျှင်နှင့်အချို့သောထောက်ခံမှုရတဲ့, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းကိုဆိုလိုသည်။ ထိုသို့မည်သို့ပင်, သင်တို့အဘို့အရာတစ်ခုခုပြုသင့်ကိုယ်ပိုင်ခွက်ကိုဖြည့်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ။ ဒါဟာသင်ပိုကောင်းခံစားရစေမည်နည်းအသက်ရှည်သမျှဒေသများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ပိုကောင်းအလေးပေးနှင့်။ ဤသည်ကိုလည်းသင်၏အကြားဆက်ဆံရေးနှင့်သင့်မိတ်ဖက်ထောက်ပံ့ဖို့နောက်ကျောပေးဖို့ပိုပြီးစွမ်းအင်ဖြင့်သင်တို့ကိုစွန့်ခွာမည်ဖြစ်သည်။